Ryuko Fahatsiarovana Hall Hall Fampiratiana fiaraha-miasa Galeri Gallery | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Lisitry ny fandraisana mpiasa>
Momba ny fampirantiana fiaraha-miasa "Ryuko Kawabata vs. Ryutaro Takahashi Collection-Makoto Aida, Tomoko Koike, Hisashi Tenmyouya, Akira Yamaguchi-" notontosaina tamin'ny 3 septambra (Sat) ka hatramin'ny 9 novambra (Masoandro) tao amin'ny Reiwa 4 A curator tao amin'ny Ryuko Memorial Hall ao amin'ny Hanazava i Ota Ward.
Rehefa avy nandray fepetra hisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao izahay dia hanao lahateny galeria arak'izay misy ny mpandray anjara betsaka indrindra.
〇 Daty sy ora
Daty: 9 septambra (Masoandro), 19 Oktobra (Masoandro), 10 Novambra (Alarobia / fialantsasatra)
Ora: 11:30 ~, 13:00 ~ isaky ny mandeha
Miankina amin'ny toe-javatra misy ny aretina, mety tsy maintsy manova daty ianao na miala amin'ilay hetsika.
Amin'izay dia hifandray aminao izahay.Aza hadino fa.
* Ny atiny isaky ny fivoriana dia mitovy (40 minitra eo ho eo).
* Mba hisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra coronavirus vaovao dia manamarina ny fanaovana sarontava izahay ary manamarina ny fahasalamana amin'ny fotoana hidirana.
* Azafady azafady fa ny anarana sy fampahalalana momba ny fifandraisana izay nangatahinao dia azo omena amin'ny sampan-draharahan'ny raharaham-panjakana toy ny tobim-pahasalamam-bahoaka raha ilaina izany.
Efitra fampirantiana ny Ryuko Memory
Olona 25 isaky ny fotoana * Fototra voalohany-tonga-nanompo (fe-potoana raha vantany vao tratra ny fahaiza-manao)
〇 Fanontaniana (Azonao atao koa ny mangataka amin'ny telefaona)
Ota Ward Ryuko Memorial Hall 143-0024-4 Afovoany, Ota Ward 2-1
Misorata anarana amin'ny Gallery Talk
Afaka mangataka olona hatramin'ny 2 ianao. Raha olona iray no mangataka anao dia avelao ho foana.
Fotoana fandraisana anjara irina※
10 aprily (masoandro) 17:11 10 aprily (masoandro) 17:13 11 Mey (Alarobia / fialantsasatra) 3:11 11 Mey (Alarobia / fialantsasatra) 3:13
(Ohatra) 3-1-3 Shimomaruko, Ota-ku Plaza 313
Nomera telefaona solontena※
Adiresy mailaka solontena※
Ny fampahalalana manokana omenao dia hampiasaina fotsiny raha tsy amin'ny fampandrenesana momba ny resaka Ryuko Memorial Hall Gallery Talk.
Vita ny fandefasana.
Misaotra anao nifandray taminay.